Hiran State - News: HS:- Buug uu qorey aqoonyahan reer Hiiraan ah oo ka hadlaya taariikhda Soomaaliya
HS:- Buug uu qorey aqoonyahan reer Hiiraan ah oo ka hadlaya taariikhda Soomaaliya
HS:- Inta aanan soo bandhigin taariikhda ku qoran buugaan waxaa muhiim ah in aanu bulshada u iftiimino in uu Buugaan soo bixi doono dhawaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Hiiraana la gaarsiin-doono ka hor 2014-ka xiligaas oo lagu rajoweyn yahay in ay ardeyda Hiiraan ku qaadan doonaan Iskuulada.
Buugaan waxuu ka hadlayaa taakiikh dhab ah oo aan dadna lagu dulmineyn ahna mid jirta. waxaa qoray aqoonyahan reer Hiiraan ah markii aanu soo galino qeynta ugu danbeysa ee Buuga ayaanu magaciisa iyo taariikh nololeedkiisa bulshada u soo galin doonaa maadaama ay hada na soo gaareen nuqulo horu dhac ah oo ka mid ah taariikhda ku qoran buugaan muhiimka ah.
Shabakada HS.COM oo ay ku tixan yahiin jiilkii berito reer Hiiraan hogaamin lahaa badankood waxey tani u noqoneysaa cashar fiican maadaama ay ogaanayaan taariikh aan waligood loo sheegin kuna soo aaday waqtigii loo baahnaa.
Qeybta 1aad waxaanu kaka hadli doonaa Taariikhda siyaasadii la soo maray waqtigii aanu gobanimada qaadanay ilaa xiligii uu xilka si sharaf leh uga dagay madaxweynahii ugu horeeyey Aden Cabdulle Cismaan iyo ragii bedelay isaga meeshey wax marsiiyeen iyo sida ay iskugu qaldeen qaranka iyo qabiilka.
Qeybta 2aad waxey ka hadleysaa siyaasadii dhax martay reer Hiiraan iyo reer Puntland war helaa talo hela marka aad qeybta reer Hiiraan iyo reer Puntland quseysa siiba Majeerteen aad aragto waxaan marnaba dhici doonin in nin Puntland ka yimid agaasimo danbe ka noqdo Hiiraan amaba xil danbe ka qabto, sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in canshuur reer Hiiraan laga qaaday hada ka dib lagu dhiso degaano kale sidii horay u dhici jirtay.
· admin on March 10 2013 01:37:57 · 0 Comments · 1482 Reads ·
14,638,348 unique visits